DAAWO:Qofkii ugu horeeyey oo isagoo caafimaad qaba laga saaray xarunta Karantiilka Gaalkacyo
May 20, 2020 Mahad Jama 2
GAROWE(P-TIMES)- Xarunta Karantiilka dadka qaba cudurka Coronavirus ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa manta ka baxay bukaankii ugu horeeyey ee ka caafimaada cudurkaasi, kaas oo lagula tacaalayey muddooyinkii ugu dambeeyey xaruntaasi.
Munaasibad kooban oo lagu sagootinayey bukaankani ka baxay xarunta Karantiilka Gaalkacyo ayaa waxaa ka hadlay qaar kamid ah dhakhaatiirta, hawl wadeenada iyo sidoo kale ehelada shakhsiga ka bogsaday cudurka Coronavirus kaas oo jira 70 sano.
Dr. C/qaadir Axmed Maxamed oo kamid ah dhakhaatiirtii gacanta ku hayey odaygani waayeelka ah ee ka bogsaday cudurka Corona ayaa faah faahin ka bixiyey qaabka uu ku bogsaday iyo heerkii uu soo maray inta uusan caafimaadin.
Waxa uu sheegay in ay markii hore keeneen xaruntani isaga oo ay ku dhagan tahay neeftu isla markaasna baadhitaano lagu sameeyey lagu ogaaday in uu qabo cudurka Coronavirus.
Labo baadhitaan oo kala duwan ayaa la mariyey bukaanka maanka ka baxay xarunta Karantiilka magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo lagu xaqiijiyey bad qabka caafimaadka oo ugu dambeyntii lagu wareejiyey eheladiisa oo sugayey.
Waxaan layaabay dad ka soomaalida Iyaga oo awoodi kara Inay Soomaali ku hadlaan waxa ay ingiriis ka ugu hadlaan waxa uu isticmaalay
Protocol, team,gardline nurse, iyo Kuwa kale Oo badan malaha waa lagu faanaa.
Faaraxow, adeerow waad liidata oo waad dambaysa ee laqabso wacyiga IMAAN làaanta, Axdi làaanta, dibindaabyada, caqli xumada iyo Halagaa sheego.≈©≈ILA SOCO igama dhammaane. WBT